Ecotrade Group | လူကြီးမင်းတို့၏ ကျောက်ဇကာမှ အဖိုးတန်သတ္တုများကို သန့်စင်ခြင်း
Toll refining ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်းတို့၏ ကျောက်ဇကာ အတွင်းရှိ အဖိုးတန်သတ္တုများဖြစ်သော Platinum Palladium နှင့် Rhodium များကို Ecotrade မှ အခကြေးငွေယူ၍ သန့်စင်ပေးသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ သန့်စင်ပြီးသော ရရှိလာသော အဖိုးတန် သတ္တုများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် Ecotrade ကုမ္ပဏီ တစ်ခုထဲကသာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြင့် ကျောက်ဇကာများထဲမှ အဖိုးတန် သတ္တုများ သန့်စင်သော refining ၀န်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
နမူနာ Refining ပြုလုပ်ပြီး ရရှိလာသော အဖိုးတန်သတ္တု အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုး ရလာဒ်အဖြေသည် တိကျသေချာပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိမှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Ecotrade သည် နမူနာ လုပ်ငန်းစဥ် သည် တိကျသေချာပြီး အဆင့်တစ်ခု ချင်းဆီတိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ထို့ကြေင့် ပြန်လည်သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖိုးတန်သတ္တုများ ပါ၀င်နှုန်းကို လျှင်မြန်တိကျသေချာစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးနိုင်ရန် ထိပ်တန်း XRF Spectrometer Analyzer ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ခန့်အပ်ထားသော ကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်းများကို အမြဲတမ်း စဥ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်စေပြီး လူကြီးမင်းတို့ကို အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) လူကြီးမင်းတို့ အေးဂျင့်များ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဥ် များကို လွတ်လပ်စွာ လာရောက် အကဲဖြတ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မတူညီသော နမူနယူ သန့်စင်ခြင်းမှ ရရှိလာသော အဖြေများကို ထိရောက်မှုရှိစွာ စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ရန် batch တစ်ခုခြင်း စီအလိုက် ‌ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အအုံတွင် လူကြီးမင်းတို့ အဖိုးတန် သတ္တုများကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး လုံခြုံမှု ရှိစေရန် အပြည့်အ၀ ‌‌ဆောင်ရွက်ထားပြီး အကောင်းဆုံး ၀န်ထမ်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မေးမြန်းနိုင်သည် !
၁. နမူနာယူခြင်း လုပ်ငန်း
အိတ်ဇော ကျောက်ဇကာများ လက်ခံရရှိသော အခါ အတွင်းရှိ ပျားလပို့ မျက်နှာပြင် (Honey Comb) ကို ယူရန် Hydraulic ညှပ်စက်ကို အသုံးပြု၍ အခွံများကို စတင်ဖယ်ရှားသည်။ ပျားလပို့ မျက်နှာပြင်သည် အက်ကွဲပြီး သိုလှောင်ကန်ကို ကျဆင်းသွားပါမည်။ ထို့နောက် အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အခြောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို သီးခြား နှစ်ကြိမ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်သည် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ ကြာမြင့်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ကို တိကျစွာ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
နမူနာယူ အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းမှ ရရှိလာသော powder များကို တစ်စုံတစ်ရာ ကွဲလွဲမှု ဖြစ်ပါက သိရှိနိုင်ရန် ဖော်သည်အတွက် ၊ လုပ်ငန်းတွင်း စစ်ဆေးရန် အတွက် ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက် နှင့် Library အတွက် ဟူ၍ အပိုင်း(၄)ပိုင်း နမူနာ ထပ်ခွဲပါသည်။
Ecotrade မှ platinum palladium rhodium ပါ၀င်မှု စမ်းသပ် စစ်ဆေးရန် နမူနာ တစ်ခုယူပြီး နောက်ထပ် နမူနာတစ်ခုကို လွတ်လပ်သော ဓါတ်ခွဲခန်းကို ပို့ဆောင်ပါသည်။
ငွေပေးချေခြင်း ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
နမူနာယူပြီး နောက်ရက်တွင် XRF ရလာဒ်ပေါ် အခြေခံပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြိုတင်ငွေ ပေးချေရပါမည်။ ပုံမှန်အခြေအနေအရ ကြိုတင်ငွေ ပေးချေပြီး ကျန်ငွေ များကို ၁၀ ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ ပေးသွင်းရပါမည်။
နောက်ဆုံး အကြိမ်ငွေပေးချေခြင်း နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှု ရလာဒ်များနှင့် ကြိုတင်ငွေ ပေးချေမှုကို နုတ်ယူပြီးနောက်တွင် အခြေခံပါမည်။
ဓါတ်ကူပစ္စည်း အမြောက်အမြားကို ထုတ်ပိုးပြီး အရည်ကျိုခြင်း ကို အဆင့်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ပေးပို့သည်။
ဓါတ်ကူပစ္စည်းများမှ Platinum Palladium Rhodium များ ပြန်လည်ရရှိစေရန် အရည်ကျိုခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည်။
သတ္တုများကို ခွဲထုတ်ပြီး အပိုင်းအစများအား ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို Platinum Palladium Rhodiumတို့ကို ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်ပုံစံအဖြစ် သန့်စင်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
၉.အဖိုးတန် သတ္တုများ ပို့ဆောင်ခြင်း
PGM ၏ ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်ကို Ecotrade ၏ သတ္တုအကောင့်သို့ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည်။
၁၀. အဖိုးတန် သတ္တုများ ရောင်းချခြင်း
Ecotrade မှလည်း platinum, palladium, and rhodium များကို US Europe နှင့် အာရှ နိုင်ငံများတွင် ‌ရောင်း၀ယ်မှုပြုလုပ်သည်။
A) လူကြီးမင်းတို့ ကိုယ်တိုင် သတ္တုများကို အမျိုးအစားခွဲခြင်း
ပစ္စည်းသည် သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့ပြီး အပျက်အစီးများ ကင်းစင်ရပါမည်။ အိတ်ကြီးကြီး သို့မဟုတ် သတ္တုဒရမ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ အကယ်၍ သတ္တု (ပလက်တီနမ်၊ ပါလက်ဒီယမ်၊ ရိုဒီယမ်) ကို အကာအကွယ်မထားခဲ့ပါက စျေးနှုန်း အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည် ။ စျေးနှုန်းသည် သင်၏ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို လက်ခံရရှိချိန်တွင် စျေးကွက်ပေါက်စျေးပေါ် အခြေခံသည်။
B) Ecotrade မှ သတ္တုများကို အမျိုးအစားခွဲခြင်း
Ecotrade သည် သင့် converters များကို အခကြေးငွေမယူဘဲ ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြေစာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံအဆင့်သတ်မှတ်စစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်းအထွက်နှုန်း၏ အလေးချိန်နှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် အဖိုးတန်သတ္တုပြန်အမ်းမှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြသည့် အစီရင်ခံစာကို ပေးပါမည်။ အဖိုးတန်သတ္တုအထွက်နှုန်းကို ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းမပြုပါက (အာမခံထားရှိခြင်း) ဖြင့် သင့်စမ်းသပ်မှုရလာဒ်များကို ဆုံးဖြတ်ချိန်တွင် လက်ရှိပေါက်ဈေးအတိုင်း စျေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင်ဆန္ဒရှိသလောက် Batch အလိုက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Batch တစ်ခုစီသည် သင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။
- နမူနာယူပြီး နောက်ရက်တွင် XRF ရလာဒ်ပေါ် အခြေခံပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြိုတင်ငွေ ပေးချေရပါမည်။ ပုံမှန်အခြေအနေအရ ကြိုတင်ငွေ ပေးချေပြီး ကျန်ငွေ များကို ၁၀ ရက်ထက် နောက်မကျဘဲ ပေးသွင်းရပါမည်။
နောက်ဆုံး အကြိမ်ငွေပေးချေခြင်း နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှု ရလာဒ်များနှင့် ကြိုတင်ငွေ ပေးချေမှုကို နုတ်ယူပြီးနောက်တွင် အခြေခံပါမည်။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု (သို့မဟုတ်) စောစီးစွာ ငွေပေးချေမှုတိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း အဖိုးတန်သတ္တုများကို ရောင်းချရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မေးမြန်းနိုင်ပါသည်!
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မေးမြန်းနိုင်သည်!